Christianity Related Articles | Calvary Burmese Church
Category Archives: Christianity Related Articles
BC 1010 မှ ၉၇၀ ခုနှစ် အတွင်းစိုးစံခဲ့သည့် အစ္စရေး နိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက် ဘုရင်ဖြစ်သည်။ ရုသ ၄း၁၇ တွင် ဒါဝိဒ် (ဒေးဗစ်) ၏ နာမည်ကို ပထမဦးဆုံး ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ သူသည် ဗက်လင် မြို့၏ သာမန် အညတြ သိုးကျောင်းသား ငယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး Advertisements
ဘုရားတကာ တို့၏ အထက်တွင် ယေရှုဘုရား၏ ထူးကဲ၊ ဆန်းကြယ်၊ အံ့သြဘွယ်ရာများ နှင့် လူနတ်စင်္ကြာဝဠာ ၏ ဖြစ်ပေါ်ပုံ
မနုဿ လူသား အားလုံးသည် တမလွန် ဘ၀၌ သုခ ချမ်းသာကို မျှော်လင့် ကြရာတွင် မှန်မည်ထင်၍ မျှော်လင့်စောင့်ဆိုင်းနေရသော်လည်း ထီထိုး၍ ထီမပေါက်သူ ကဲ့သို့
သခင်ယေရှုမှလွဲလျှင် မောရှေ လောက် လူသိများသောသူ ဂျူးလူမျိုး တို့၏ သမိုင်းတွင် ရှိမည် မထင်ပါ။
အထက်ပါခေါင်းစဉ်ဖြင့် အစချီပြီး ရေးလိုက်သော စာမူကို ဖတ်ရှုသူတိုင်း အံ့သြကောင်း အံ့သြသွားပါလိမ့်မည်။ ဆရာယုဒသန်သည် မြန်မာသမိုင်း၌ ရာဇ၀င် တွင်သော
The Doctrine of Adoniram Judson (ယုဒသန်၏သွန်သင်ချက်)
ဇူလိုင်လ သည် မြန်မာပြည်ရှိ ယုံကြည်သူများ အတွက် နှစ်ခြင်း သာသနာတော် စတင်ရာက်ရှိ လာရာ လထူးလမြတ် ဖြစ်သကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့နှစ်ခြင်း သမိုင်းတွင်လည်း အရေးကြီး လှသော သာသနာ့သမိုင်းမှတ်တိုင် စိုက်ထူရာ လဖြစ်ပါသည်။
A Mother’s Love (မိခင်မေတ္တာ)
မိခင် များနှင့် ပတ်သက်ပြီး စာရေးဆရာ တစ်ဦးက သည်လို ရေးသားခဲ့ဘူးသည်။ “မိခင်များဟာ ဘ၀ရဲ့ ဆရာသမား၊
အစ္စရေး၊အာရပ်၊အိုဘားမား-မြန်မာ (Religious Knowledge)
အခုရေးမဲ့ အာရပ်နဲ့ အစ္စရေး အရေးအခင်း ဆိုတာ လူမျိုးရေးပါ။
World Bridge International ၏ weekly word အစီအစဉ်မှ Dr. James Singzakhai ၏ ပင်လယ်နီ ကို ဖြတ်သန်းခြင်း။
ဓမ္မသီချင်းတို့၏ ရာဇ၀င် (ဗက်လင်မြို့ ငယ်)
နားထောင်၍ ကောင်းသော ဤခရစ္စမတ် ဓမ္မသီချင်းကို ၁၉ ရာစု အတွင်းတွင် နာမည်ကြီး တရားဟောဆရာကြီး တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သော Phillips Brooks က ရေးစပ်ခဲ့သည်။
ဓမ္မသီချင်းတို့၏ရာဇ၀င် (All the way my savior leads me)
သီချင်းစာသား – ဖန်နီ ဂျေ ခရိုစ်ဘီ (၁၈၂၀-၁၉၁၅) တေးရေး – ရောဘတ်လော်ရီ (၁၈၂၆-၁၈၉၉) “ကောင်းသောသူ၏ ခြေရာတို့ကို ထာဝရဘုရားသည် ပဲ့ပြင်၍၊ သူသွားရာလမ်းကို နှစ်သက် တော်မူ၏” (ဆာလံ ၃၇း၂၃)။ ဤ ဧ၀ံဂေလိ ဓမ္မသီချင်းမှာ
မီးလျှံဟုန်းဟုန်း တောက်နေသော အသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်နေခြင်း
Reinhard Bonnke ရီအင်ဟဘုန်းကီးလို့ပြောလိုက်ရင် သူ့နာမည်၊ သူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ သူ့ရဲ့ တရားဟောပြောကောင်းမှု၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတို့ကြောင့် ဘယ်သူကိုမှ ထွေထွေထူးထူး အထူးမိတ်ဆက် ပေးနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။
PDF Version (David Livingstone)(၁၈၁၃ – ၁၈၇၃) “အမေ ဒါကျွန်တော်တစ်ပါတ်အတွင်းရှာနိုင်ခဲ့တဲ့အရာပဲ” ဟုဒေးဗစ် သည်သူ့မိခင်ပေါင်ပေါ်ငွေအနည်း တင်လျက်စိတ်ထက်သန်စွာပြောခဲ့၏။
PDF Version သမ္မာကျမ်းစာတွင် ယေရုရှလင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ယနေ့ထိတိုင်အောင် ပြီးပြည့်စုံခြင်း မရောက်သေးသည့် ဗျာဒိတ် တစ်ခုရှိသည်။ အချို့သော သူတို့က ဤ ဗျာဒိတ်သည် အမှန်တကယ် ဖြစ်လာဦးမည်လော ဟု သံသယ စိတ်များကြသည်။
ဖန် ဆင်း ခြင်း သက် သေ များ (၄)
မျောက် က နေ လူ ဖြစ် သ တဲ့ လား။ ၂၀၀၉ ခု နှစ် တွင် ကျ ရောက် သော ဒါ ၀င် ၏ နှစ် ၂၀၀ ပြည့်မွေး နေ့ကို ပ ညာ ရှင် အ … Continue reading →
February 24, 2012	·2Comments
အင်္ဂလိပ်သီချင်းစာသား – စတူးဝပ် ကေ ဟိုင်း (၁၈၉၉) သံစဉ် – စတူးဝပ် ကေ ဟိုင်း နှင့် Manna Music PDF version for who doesn’t have Myanmar font “ထာဝရဘုရားသည် ကြီးမြတ်၍ အလွန်ချီးမွမ်းဘွယ်ဖြစ်တော်မူ၏။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ခန့်က ကမ္ဘာ ကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် (Mel Gibson) ရိုက် ကူးသော (Passion of Christ) ရုပ်ရှင်ကား သည် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ ရုပ်ရှင်ပရိတ်သတ်များ ၏နှလုံးသားကိုဆွဲကိုင်လှုပ်ခါနိုင်ခဲ့ကာ ၀င်ငွေ အမြတ် မီလျံ (၃၀၀)ကျော်ရရှိခဲ့သည်ကို
June 25, 2011	·2Comments
ဓမ္မသီချင်းတို့၏ရာဇ၀င် (Count Your Blessing)
Johnson Oatman, Jr Born: April 21, 1856, near Medford, New Jersey. Died: September 25, 1922, Norman, Oklahoma. Buried: Mt. Holly, New Jersey.
ယနေ့ခရစ်ယာန်စာပေလောကနှင့် ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များအကြားတွင် “The Purpose Driven Life” စာအုပ်ကိုမသိသူ အလွန်ရှားပေသည်။
ဓမ္မသီချင်းတို့၏ရာဇ၀င် (ရှိသည့်အတိုင်း Just As I Am)
သီချင်းစာသား – Charlotte Elliott ၁၇၈၉-၁၈၇၁ တေးရေး – ၀ီလျံ၊ ဘီ၊ ဘရက်ဘာရဂီ ၁၈၆၁ – ၁၈၆၈ ယေရှုကလည်း၊ ငါသည် အသက်မုန့်ဖြစ်၏။
> အတွေးအခေါ်အယူအဆ တစ်ခုဖြစ်စေ၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ တစ်ခုဖြစ်စေ၊ လက်ခံ ကျင့်သုံးသော ဥပဒေသတစ်ခုဖြစ်စေ မိမိယုံကြည်သော ကိုးကွယ်သော လက်ခံကျင့်သုံးသော အရာသည်မည်မျှမည်ရွေ့ ခိုင်မာသည်၊ ယုံကြည်လောက်သည်
February 16, 2011	· Leaveacomment
Billy Graham နှင့်သားအား သမ္မတ အိုဘားမားမှသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့စဉ် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဘီလီဂရေဟမ်သည် ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင်ခရစ်ယာန်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို လူအများဆုံးတို့ထံသို့ဟောပြောသူ၊ ကြားသိလက်ခံစေသူ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံရသူဖြစ်သည်။
December 1, 2010	· Leaveacomment
အက်ဒ်ဝါဒ်စပင်ဆာ သည် ၁၈၆၀ ပတ်ဝန်းကျင် ခန့်တွင် အီလီနွိုက်ပြည်နယ် အီဗင်စတုံး မြို့၏ North Western University ၌ ကျမ်းစာ ကျောင်းသား တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
November 24, 2010	· Leaveacomment
ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သော ကောက်နှုတ်ချက်များ
ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ကောက်နှုတ်ချက်များ ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၂၀၁၀ အောက်တိုဘာလထုတ် မြန်မာ့တမန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ယုံရှမ်း (ရှင်ဘွေယန်မြို့) က ကမ္ဘာ့ထင်ရှားကျော်ကြားသူများရဲ့ မှတ်ချက်ကို
သခင်ယေရှုချီဆောင်ခြင်းခံရသည့် နောက်ပိုင်းအဖြစ်အပျက်များကို လေ့လာခြင်း သခင်ယေရှု ကောင်းကင် သို့ချီဆောင်ခြင်း ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ခရစ်ယာန် ဘာသာသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း အရပ်ဒေသမှတဆင့်
November 1, 2010	· Leaveacomment
ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာခေတ်မှအဖြစ်အပျက်များကိုလေ့လာခြင်း (၁) ခရစ်တော် မွေးဖွါးသည့် ဓမ္မသစ်ကျမ်း ခေတ်မတိုင်ခင် နှစ်ပေါင်း ၃ဝဝ ခန့်ကို ပြန်ကြည့် မည်ဆိုပါက တိုင်းတပါး လူမျိုးခြားတို့၏ ကျုးကျော်သိမ်းပိုက်မှု ကိုဆက်တိုက် ခံရသည်။
October 29, 2010	· Leaveacomment
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ အဖြစ်အပျက်များကို လေ့လာခြင်း။ အစအဦး၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်၊ မြေကြီးနှင့် အရာခပ်သိမ်း တို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူပြီး ပထမဦးဆုံးသော လူသားဖြစ်သည့် အာဒံနှင့် ဧဝတို့ကို လည်း ဖန်ဆင်းတော်မူ ၏။
October 28, 2010	· Leaveacomment
ယနေ့ ကမ္ဘာမှာ လက်ခံ အသုံးပြု နေသော သမ္မာကျမ်းစာဖြစ်ပေါ် လာရန် အတွက် ဘုရားသခင် သည်လူတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘဲ လူအတော်များများ ကိုအသုံးပြုကာ ရေးသားစေခဲ့ပြီး၊
၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ဂျိုးလ်အော်စ်တင်သည် သူ၏ ဖခင်ထံမှ Lakewood ဘုရားကျောင်း (အသင်းတော်) နှင့် ထိုအသင်းတော်၏ ရုပ်မြင်သံကြားသာသနာလုပ်ငန်းကို အမွေအဖြစ်ဖြင့်ဆက်ခံရရှိခဲ့သည်။
October 26, 2010	· Leaveacomment